အိုးမကြာ အိမ္မကြာ အလုပ္မပ်က္ English ေလ့လာ - Myanmar Network
Posted by Kyaw Moe Aung on February 26, 2016 at 5:46 in သုတ/ရသ ေဆာင္းပါးမ်ား
မၾကာခဏ ဆိုသလို ၾကံဳႀကိဳက္ တိုက္ဆိုင္တိုင္း အေမးခံရတဲ့ ေမးခြန္း တစ္ခု ရွိပါတယ္။ သူတို႔ ေမးတာက အဂၤလိပ္စာအဂၤလိပ္စကား တတ္လည္း တတ္ခ်င္တယ္ ... သင္တန္းေတြဘာေတြ တက္ဖို႔လည္း အေျခအေန မေပးဘူး ... ဘယ္လို ေလ့က်င့္ရမလဲ ဆိုတာပါ။
ေမးတဲ့သူေတြက အမ်ားအားျဖင့္ လူလတ္ပိုင္း အရြယ္ေတြေပါ့။ ရာထူးတာဝန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ဳိးစံုနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနၾကသူ ... အခ်ိန္အား မ်ားမ်ားစားစား မရွိၾကသူ ေတြပါ။ ပညာအားျဖင့္လည္း အနိမ့္ဆံုး ဆယ္တန္းေလာက္ေတာ့ ေအာင္ထားသူေတြ ဘြဲ႔ရေတြပါ။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အရင္ကထက္ ျမန္မာျပည္ကို အဝင္အထြက္ ပိုမ်ားလာတဲ့ .... ျပည္တြင္းကသူေတြ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အသြားအလာ ပိုမ်ားလာတဲ့ ခုေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ကြ်မ္းဖို႔ ပို အေရးပါလာေတာ့ ပို စိတ္ဝင္စားလာၾကတာေပါ့ေလ။
အဲလုိမ်ဳိး အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္းေတြ … သင္တန္းေတြ တက္ေနဖို႔လည္း အဆင္မေျပသူေတြ အိုးမကြာအိမ္မကြာ အလုပ္မပ်က္ေစဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ႏိုင္မလဲ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
၁။ ၾကား ေျပာ ဖတ္ ေရး
စကားေျပာျခင္းရဲ့ အစက နားေထာင္ျခင္းပါ။ ကေလးငယ္ေတြ စကားဘယ္လိုေျပာတတ္လဲ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကိုယ္နားရည္ဝေနတာကို တုပေျပာရင္း ေျပာတတ္လာတာ ဆိုတာ သတိထားမိမွာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာ သူငယ္တန္းအရြယ္ေလာက္ ေရာက္ေတာ့ ဝလံုး ဆိုတာ စဖတ္တတ္လာတယ္။ ABCD ေတြ စ ဖတ္တတ္လာတယ္ …. ေနာက္ဆံုးမွ ေရးတာပါ။ ခုလည္းပဲ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားတစ္ခုကို အဲဒီလို အစဥ္အတိုင္း ေလ့လာရင္ အတတ္ေျမာက္ဆံုးလို႔ပဲ ဆိုပါရေစ။
ဘာသာစကားနဲ႔ မ်ားမ်ား ထိေတြ႔ပါ။ မ်ားမ်ား နားေထာင္ပါ။ ေျပာၾကည့္ပါ။ မ်ားမ်ား ဖတ္ပါ။ ေရးၾကည့္ပါ။ တတ္ကို တတ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက လြဲလို႔လည္း တတ္စရာ တျခားနည္းလမ္း မရွိပါ။
၂။ ဆိုၾကမယ္ ေပ်ာ္ၾကမယ္
အဲဒီေတာ့ ပထမဆံုးအဆင့္ ကိုယ့္အနီးဆံုးမွာ အဂၤလိပ္လို ၾကားေနရဖို႔ လိုပါတယ္။ ေျပာမယ့္သူမရွိရင္ ခပ္ဆင္ဆင္ ဖန္တီးယူႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ႏိုင္ငံျခားသားႀကီးတစ္ေယာက္က အရွင္လတ္လတ္ အနားကေန အဂၤလိပ္လို ေျပာေနမွ အဂၤလိပ္စကား ၾကားရတဲ့ေခတ္မွ မဟုတ္ေတာ့ပဲ။ ဖုန္းထဲကေနေတာင္ အသံ နားေထာင္လို႔ ရေနၿပီ ျဖစ္ေတာ့ အဂၤလိပ္လို အသံသြင္းထားတဲ့ audio file ေတြ မ်ားမ်ား နားေထာင္ေပးေပါ့။
ခက္တာက စကားေျပာ သင္ခန္းစာ အသံသြင္းထားတာေတြကို တစ္ႀကိမ္ထက္ပို အႀကိမ္ႀကိမ္ နားေထာင္ဖို႔ဆိုတာက ပ်င္းစရာ အေကာင္းသား။ဒါကို ေျဖရွင္းႏိုင္တာက ေတးသီခ်င္းေတြက တစ္ဆင့္ေပါ့ေလ။ အဂၤလိပ္သီခ်င္း မ်ားမ်ား နားေထာင္ပါ။ လို္က္ဆိုပါ။
သီခ်င္းကေန တတ္ေျမာက္ႏိုင္တာ အမ်ားႀကီးပါပဲ … စကားလံုးေတြ သိလာမယ္။ နားေထာင္စြမ္းရည္ တက္လာမယ္။ အသံထြက္ေတြ မွန္မွန္ ထြက္တတ္လာမယ္။ intonation ေတြ stress ေတြ rhythm ေတြ သင္မွန္းမသိ သင္ယူၿပီးသား ျဖစ္လာမယ္။ စာေၾကာင္းလိုက္ သဒၵါမွန္မွန္ သံုးတတ္လာမယ္။ (သဒၵါနည္းက် မဟုတ္တဲ့ ခၽြင္းခ်က္ တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ဒီမွာ ထည့္မေျပာေတာ့ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ သီခ်င္းမ်ားမွာလည္း သဒၵါမွန္ပါတယ္။) အဲဒီ သီခ်င္းစာသားေတြေနရာမွာ အစားထိုးၿပီး တျခားဝါက်ေတြ ေျပာင္းေျပာလို႔ ေရးလို႔ ရပါမယ္။
ဥပမာေလး ေျပာရရင္ “Just give meareason” ဆိုတာကေန “Just tell me the answer.” “Just show me the way.” “Just tell me the truth.” စတာေတြ ပြားယူတာမ်ဳိးပါ။ သီခ်င္းတိုင္းကေန ဒီလို ေလ့လာယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္ခ်င္ရင္ ခုပဲ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ရင္း လိုက္ဆိုၾကည့္လိုက္ၾကေတာ့ေနာ္။
၃။ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္ ပါးစပ္ မပိတ္ေၾကး
ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္ၿပီး ဘာႀကီးပါလိမ့္ ထင္မိမယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ကိုယ့္အားလပ္ခ်ိန္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ရင္ (ခပ္တိုးတိုးပဲျဖစ္ျဖစ္ .. အနည္းဆံုး စိတ္ထဲကေနျဖစ္ျဖစ္) ေနာက္ကေန လိုက္ေျပာၾကည့္ဖို႔ပါ။ ကိုယ္ေျပာတာ မွားမ်ားေနမလား … သူမ်ားက ကိုယ့္ကို ေလွာင္မ်ား ေလွာင္မလား စိုးရိမ္စရာ မလိုတဲ့ စကားေျပာေလ့က်င့္နည္းပါ။ မိသားစုဝင္ေတြေရွ႕ေတာ့ ရွက္စရာမလိုဘူး ထင္ပါတယ္ … အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေစခ်င္လို႔ ေလ့က်င့္ေနတာပဲေလ။ ေလွာင္စရာမွ မဟုတ္တာ။
အျမဲတမ္း လုပ္ရမယ္ မဆိုလိုပါ။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အနားယူရင္း အဂၤလိပ္ကား ၾကည့္ခ်ိန္မွာ အပ်င္းလည္းေျပ အဂၤလိပ္အရည္အေသြးလည္း တိုးတက္စရာ … တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ပါ။ ရုပ္ရွင္မွ မဟုတ္ပါ … BBC VOA Al Jazeera သီတင္းေတြ နားေထာင္ရင္းလည္း ေလ့က်င့္လို႔ရတာပဲ။ က်ယ္က်ယ္ အသံထုတ္ လိုက္မေျပာျဖစ္ရင္ေတာင္ နားေထာင္ရင္း အသံူးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာျဖစ္ေနမွာေပါ့။ မရွက္ပါနဲ႔ … လုပ္ၾကည့္ပါ။
သူတို႔ ေျပာေနတဲ့ ႏႈန္းက ျမန္ေနေတာ့ လိုက္ေျပာရမွာ ခက္မွာေပါ့ … မီသေလာက္ လိုက္ေျပာၾကည့္ပါ။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ တစ္ေၾကာင္းေက်ာ္ၿပီး ဆိုပါစို႔။ အခ်ိန္တစ္ခုအၾကာမွာ ႏႈတ္သြက္လာတာ သတိျပဳမိမွာပါ။
၄။ ကေလးငယ္ေတြကို အသံုးခ်ပါ
အိမ္မွာ ကေလးငယ္ရွိရင္ အခြင့္ေကာင္းပါ။ သူတို႔အတြက္ ကာတြန္းကားေလးေတြ ျပျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ လူႀကီးေတြလည္း ေလ့က်င့္ဖို႔ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခု ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့ အဂၤလိပ္ ပံုျပင္စာအုပ္ေလးေတြ ကာတြန္းစာအုပ္ေလးေတြကို ကို္ယ့္တူကိုယ့္သားမ်ားကို အသံထြက္ ဖတ္ျပေပးဖို႔ပါ။
အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခ်က္ ေျပာလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ေရးတဲ့စာအုပ္ေတြ ထုတ္တဲ့ အေခြေတြကို (လံုးဝ) အားမထားပါနဲ႔။ ေစာ္ကားလိုျခင္း အလ်ဥ္းမဟုတ္ပါ … ဒါေပမယ့္ ၾကံဳဖူးသေလာက္ အမွားေတြ အလြန္ မ်ားလို႔ပါ။ မူရင္း authentic material ေတြကိုသာ သံုးပါ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ျမန္မာေတြေရးတဲ့ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္တဲ့ ကေလးစာအုပ္မ်ားသည္ (အားလံုး ဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနတယ္ မဆိုႏိုင္ေပမယ့္) ဘာသာစကား ေလ့လာစရာ အေကာင္းဆံုး စံနမူနာ မဟုတ္လို႔ မူရင္း အဂၤလိပ္ စာအုပ္မ်ား အေခြမ်ားကိုသာ သံုးၾကဖို႔ အၾကံျပဳတာပါ။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ကေလးငယ္မ်ားကို အသံုးခ်ရင္း အဂၤလိပ္လို ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာၾကည့္ၾကေစခ်င္တာပါ။ “Let’s go.” “Wait for me.” “It’s lunch time.” “Open your mouth.” စတာမ်ဳိးေလးေတြက အင္မတန္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေပမယ့္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ မေျပာျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ေနရင္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ေျပာရင္း ကိုယ္လည္း ႏႈတ္သြက္လာပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ကေလးေတြကို International School ေတြမွာ ထားဖို႔ စိတ္ကူးထားတယ္ … ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိ အဲလိုေက်ာင္းေတြမွာ ထားေနတယ္ ဆိုရင္ေပါ့။ ကေလးအတြက္ေရာ မိဘအတြက္ပါ အက်ဳိးရွိပါလိမ့္မယ္။
၅။ကေလးလုပ္ပါ … သူငယ္ျပန္ပါ
ကေလးစာအုပ္ေလးေတြ ဖတ္ပါ။ Graded Readers ေတြ ဖတ္ပါ။ ကေလးစာေပဆိုၿပီး အထင္မေသးပါနဲ႔။ အေျခခံက်က် အသံးအႏႈန္း မွန္မွန္ကန္ကန္ အဲဒီကေန ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္မသိထားေသးတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြလည္း ေတြ႔မိပါလိမ့္မယ္။Audio book ေတြလည္း လာတတ္လို႔ အားခ်ိန္မွာ စာအုပ္နဲ႔တြဲၿပီး နားေထာင္ရင္း အသံထြက္ဖတ္လို႔ ရပါတယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက လူႀကီးေတြမွာ လိုေနတတ္တဲ့ အေျခခံေလးေတြကို ကေလးစာေပ ဖတ္ရင္း ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ အၾကံေပးခ်င္တာပါ။ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ ကားေမာင္းရင္း ကားစီးရင္း ရထားစီးရင္း ဆိုင္ကယ္စီးရင္းလည္း နားေထာင္လို႔ ရတယ္ေနာ္။
၆။ Social Media ကို အသံုးခ်ပါ
Facebook အပါအဝင္ social media ေတြကေန သင္ယူတတ္မယ္ဆို သင္ယူစရာ အမ်ားႀကီးပါ။ English ဘာသာစကား လမ္းညႊန္ေတြ သင္ခန္းစာေတြ ေန႔စဥ္ တင္ေပးေနတဲ့ page ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ like လုပ္ထား … follow လုပ္ထားပါ။ ႏိုင္ငံတကာက အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာေနသူေတြ ဖြဲ႔ထားတဲ့ group ေတြ ရွိပါတယ္။ member ဝင္ထားပါ။ friend မဟုတ္ေနရင္ေတာင္ သူတို႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိေနပါမယ္။ ကို္ယ္ စိတ္ဝင္စားရာေခါင္းစဥ္ရွိရင္ မွားမွာမေၾကာက္ဘဲ အဂၤလိပ္လို ပါဝင္ ေဆြးေႏြးပါ။ comment ေပးပါ။ ေမးလိုတာကို ေမးပါ။ ဒီနည္းအားျဖင့္လည္း အေရးအဖတ္စြမ္းရည္မ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ့က်င့္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
၇။ Diary ေရးပါ
အဂၤလိပ္လို diary ေလး ႀကိဳးစားၿပီး ေရးၾကည့္ပါလား။ အေသးစိတ္ ေရးဖို႔ မဆိုလိုသလို အစပိုင္းမွာ broken English လည္း ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မွာေပါ့ … အမွားလည္း ပါႏိုင္တာေပါ့။ အေရးႀကီးတာက ေရးျဖစ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ Accuracy မွန္ဖို႔ထက္ fluency ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႕ လက္ကေရးထြက္ဖို႔ ပို ရည္ရြယ္ပါတယ္။ Online မွာလည္း ေရးလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ blog ေလးေတြမွာ တစ္ေၾကာင္းစ ႏွစ္ေၾကာင္းစကေန စၿပီး ေရးလည္း ရတာပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ online မွာ ေရာက္တတ္ရာရာ စာတိုေပစ ေရးရင္း (ျမန္မာလို ဆိုလိုတာပါ။) ေရးလိုရာရာကို လူနားလည္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္း ေရးတတ္လာသလို ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ္ေရးတာကို ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္လာေစတယ္။ တစ္ရက္တစ္ရက္ကို ငါးမိနစ္ ဆယ္မိနစ္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေခါင္းထဲေပၚတာ ေရာက္တတ္ရာရာကို ballpen မလႊတ္တမ္း keyboard က လက္မခြာစတမ္း ခ်ေရးၾကည့္ပါလား။ ေရွ႕ပိုင္းမွာခက္ေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။
၈။ သိသူေဖာ္စားတဲ့ ရတနာသိုက္
အမွတ္ (၆)မွာတုန္းက social media အေၾကာင္း ေျပာၿပီးသြားပါၿပီ။ အဲဒါကေတာ့ Facebook သံုးရင္း နည္းနည္းစီ သင္ယူနည္းေပါ့။ ခုေျပာမွာကေတာ့ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးတဲ့ website ေတြ အေၾကာင္းပါ။ ျမန္မာလို ေရးထားတာဆို Myanmar Network လို ဆိုက္ေတြ ရွိပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုိယ္ အားတဲ့အခ်ိန္ေလးအတြင္း … ညဖက္ျဖစ္ျဖစ္ မနက္ေစေစာျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ အားရင္အားသလို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အခမဲ့ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ website ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ coursera တို႔ futurelearn တို႔ပါ။ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ စာရင္း ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ပါဝင္စားသူေတြနဲ႔အတူတူ စာသင္တဲ့ video clip ေလးေတြ ၾကည့္လိုက္၊ audio file ေလးေတြ ဖြင့္ နားေထာင္လိုက္၊ pdf စာအုပ္ေလးေတြ download လုပ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္လိုက္၊ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ဝင္ေျဖလိုက္၊ ကိုယ္က ေမးခ်င္တာ ေမးလိုက္နဲ႔ဆို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ အဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူေနျဖစ္တာေပါ့။ BBC Learning English တို႔လို website ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ားႀကီးပါ။ Youtube တို႔ study.com တို႔လည္း အပါအဝင္ေပါ့။ ပိုက္ဆံေပးၿပီး တက္ရတဲ့ သင္တန္းေတြလည္း online မွာ တစ္ပံုတစ္ပင္ပါ။ Academic ပို္င္း ပိုဆန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူတို႔အတြက္ဆို TED talk ေတြ နားေထာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ IELTS ေျဖဆိုဖို႔ ေလ့က်င့္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ပါ။ subtitle ပါ တြဲလ်က္ download လုပ္လို႔ရေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ပါပဲဗ်ာ။
File size အႀကီးႀကီးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္ ေသးေသးေလးေတြပါ။ဒီအတြက္ အင္တာနက္ အသုံးစရိတ္ တစ္လကို တစ္ေသာင္းႏွစ္ေသာင္းထက္ မပိုပါဘူး။ ျပန္ရမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္က အလြန္ အဖိုးတန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ internet speed ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ စိတ္မပူပါနဲ႔ ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဖုန္းတစ္လုံး laptop တစ္လံုးနဲ႔ ေက်ာင္းေတာင္တက္လာတာပါ။ မနက္ေစာေစာလိုမ်ဳိးဆို streaming ေတာင္ လုပ္လို႔ရပါေသးတယ္။
အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ခ်င္ရင္ အေရးအႀကီးဆံုက ေျပာျဖစ္ေအာင္ေျပာဖို႔ပါ။ ေျပာရမယ့္သူ မရွိျဖစ္ေနရင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေျပာ .. အသံသြင္းထား … ျပန္နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ဖုန္းတစ္လံုးရွိရင္ ကိုယ္ေျပာတာကိုယ္ နားေထာင္ၾကည့္လို႔ ရပါၿပီ။
အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ စာအုပ္ကို အသံထြက္ဖတ္တာ ရုပ္ရွင္ထဲက ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြ လိုက္ရြတ္တာေတြကို ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ အသံသြင္းထားၿပီး ျပန္ နားေထာင္ၾကည့္ … ကိုယ္ ဘာေတြလိုေနတာလည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သိပါလိမ့္မယ္။ နီးစပ္ရာ ဆရာတစ္ဦးဦးကို ေပးနားေထာင္ခိုင္းလို႔လည္း ရပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္နားမွာ ကဲ့ရဲ့ေလွာင္ေျပာင္မယ့္သူ မရွိဘူး ဆိုလည္း တစ္ယာက္ထဲ တတြတ္တြတ္ အဂၤလိပ္လိုေျပာၿပီး အသံကူးထားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကေတာ့ ေျပာစရာ အေဖာ္လည္း မရွိမယ့္သူမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာထြက္ေအာင္ လုပ္တာပါ။ ႏိုင္ငံျခားသား မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးနဲ႔ သိၾကြမ္းတယ္ဆိုလည္း သူနဲ႔ ၾကံဳတိုင္းဆံုတိုင္း တစ္လံုးစႏွစ္လံုးစျဖစ္ျဖစ္ ရေအာင္ ေျပာ။ အဓိကက ေျပာထြက္ဖို႔ပါ … မွားတာမွန္တာ ေနာက္တစ္ဆင့္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကံဳရတဲ့ ျပသနာက မေျပာရဲတာ … ကိုယ့္ႏႈတ္ကေန အဂၤလိပ္လို ေျပာမထြက္တာမ်ဳိးကိုး၊ ႏႈတ္ရဲေစဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္းေပါ့။
ဘာသာစကားတစ္ခု တတ္ကၽြမ္းဖို႔အတြက္ ျဖတ္လမ္း မရွိပါ။ အဲဒီဘာသာစကားနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လက္ပြန္းတတီး ထိေတြ႔ေနမွသာ ရတာမ်ဳိးပါ။ အဲလိုဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ကို္ယ့္အိမ္မွာ ရေအာင္ ဖန္တီးယူပါ။ တကူးတက အခ်ိန္ေပးၿပီးလည္း လုပ္သင့္သလို တျခား အိမ္အလုပ္ လုပ္ရင္း ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္း အနားယူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ ရွိေအာင္ေနပါ။ တီဗီ ဖုန္း ကက္ဆက္ ေရဒီယို ေနာက္ခံ background အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္လိုေျပာေန ဆိုေနတာ တစ္ခုခု ဖြင့္ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ။ အားစိုက္ထုတ္ၿပီး နားေထာင္မေနပါနဲ႔ … မိတ္ေဆြရဲ့နားထဲ ၾကားမွန္းမသိ ၾကားေနရရင္ကို ဦးေႏွာက္က သူ႔ဟာသူ အလုပ္လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ေသးေသးမႊားမႊား လြယ္လြယ္ကူကူေလးေတြကစၿပီး အေျပာက်င့္ပါ။ ဘသာစကားတစ္ခု ေလ့လာတာ ေပ်ာ္စရာအျဖစ္ ရႈျမင္ပါ။ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ မွားလည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါ။ ရဲစိတ္ေမြး အားတင္းထား … မရမက မျဖစ္မေန ေျပာျဖစ္ေအာင္ေျပာ ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးပါ။ ဘာေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ။
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဒီတိုင္းေနတုန္းကနဲ႔မတူဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္လာတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အံ့ၾသစရာ ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳလာရပါလိမ့္မယ္။ ကိုင္း ခုပဲ စလိုက္ၾကစို႔လား။ ဖုန္းထဲက အဂၤလိပ္သီခ်င္းေလး စနားေထာင္လိုက္ေတာ့ေနာ္။
[ ဦးေက်ာ္မိုးေအာင္ ေရးသားထားေသာ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ - Myanmar Network Admin Team ]
[ Unicode Version ]
မကြာခဏ ဆိုသလို ကြုံကြိုက် တိုက်ဆိုင်တိုင်း အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူတို့ မေးတာက အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကား တတ်လည်း တတ်ချင်တယ် ... သင်တန်းတွေဘာတွေ တက်ဖို့လည်း အခြေအနေ မပေးဘူး ... ဘယ်လို လေ့ကျင့်ရမလဲ ဆိုတာပါ။
မေးတဲ့သူတွေက အများအားဖြင့် လူလတ်ပိုင်း အရွယ်တွေပေါ့။ ရာထူးတာဝန် လုပ်ငန်းဆောင်တာ မျိုးစုံနဲ့ အလုပ်များနေကြသူ ... အချိန်အား များများစားစား မရှိကြသူ တွေပါ။ ပညာအားဖြင့်လည်း အနိမ့်ဆုံး ဆယ်တန်းလောက်တော့ အောင်ထားသူတွေ ဘွဲ့ရတွေပါ။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ အရင်ကထက် မြန်မာပြည်ကို အဝင်အထွက် ပိုများလာတဲ့ .... ပြည်တွင်းကသူတွေ နိုင်ငံရပ်ခြား အသွားအလာ ပိုများလာတဲ့ ခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းဖို့ ပို အရေးပါလာတော့ ပို စိတ်ဝင်စားလာကြတာပေါ့လေ။
အဲလိုမျိုး အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေ … သင်တန်းတွေ တက်နေဖို့လည်း အဆင်မပြေသူတွေ အိုးမကွာအိမ်မကွာ အလုပ်မပျက်စေဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တိုးတက်အောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်မလဲ ဆွေးနွေး အကြံပြုကြည့်ချင်ပါတယ်။
၁။ ကြား ပြော ဖတ် ရေး
စကားပြောခြင်းရဲ့ အစက နားထောင်ခြင်းပါ။ ကလေးငယ်တွေ စကားဘယ်လိုပြောတတ်လဲ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်နားရည်ဝနေတာကို တုပပြောရင်း ပြောတတ်လာတာ ဆိုတာ သတိထားမိမှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာ သူငယ်တန်းအရွယ်လောက် ရောက်တော့ ဝလုံး ဆိုတာ စဖတ်တတ်လာတယ်။ ABCD တွေ စ ဖတ်တတ်လာတယ် …. နောက်ဆုံးမှ ရေးတာပါ။ ခုလည်းပဲ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားတစ်ခုကို အဲဒီလို အစဉ်အတိုင်း လေ့လာရင် အတတ်မြောက်ဆုံးလို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
ဘာသာစကားနဲ့ များများ ထိတွေ့ပါ။ များများ နားထောင်ပါ။ ပြောကြည့်ပါ။ များများ ဖတ်ပါ။ ရေးကြည့်ပါ။ တတ်ကို တတ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက လွဲလို့လည်း တတ်စရာ တခြားနည်းလမ်း မရှိပါ။
၂။ ဆိုကြမယ် ပျော်ကြမယ်
အဲဒီတော့ ပထမဆုံးအဆင့် ကိုယ့်အနီးဆုံးမှာ အင်္ဂလိပ်လို ကြားနေရဖို့ လိုပါတယ်။ ပြောမယ့်သူမရှိရင် ခပ်ဆင်ဆင် ဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို နိုင်ငံခြားသားကြီးတစ်ယောက်က အရှင်လတ်လတ် အနားကနေ အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေမှ အင်္ဂလိပ်စကား ကြားရတဲ့ခေတ်မှ မဟုတ်တော့ပဲ။ ဖုန်းထဲကနေတောင် အသံ နားထောင်လို့ ရနေပြီ ဖြစ်တော့ အင်္ဂလိပ်လို အသံသွင်းထားတဲ့ audio file တွေ များများ နားထောင်ပေးပေါ့။
ခက်တာက စကားပြော သင်ခန်းစာ အသံသွင်းထားတာတွေကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို အကြိမ်ကြိမ် နားထောင်ဖို့ဆိုတာက ပျင်းစရာ အကောင်းသား။ဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်တာက တေးသီချင်းတွေက တစ်ဆင့်ပေါ့လေ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း များများ နားထောင်ပါ။ လို်က်ဆိုပါ။
သီချင်းကနေ တတ်မြောက်နိုင်တာ အများကြီးပါပဲ … စကားလုံးတွေ သိလာမယ်။ နားထောင်စွမ်းရည် တက်လာမယ်။ အသံထွက်တွေ မှန်မှန် ထွက်တတ်လာမယ်။ intonation တွေ stress တွေ rhythm တွေ သင်မှန်းမသိ သင်ယူပြီးသား ဖြစ်လာမယ်။ စာကြောင်းလိုက် သဒ္ဒါမှန်မှန် သုံးတတ်လာမယ်။ (သဒ္ဒါနည်းကျ မဟုတ်တဲ့ ချွင်းချက် တချို့ကိုတော့ ဒီမှာ ထည့်မပြောတော့ပါ။ အများအားဖြင့် သီချင်းများမှာလည်း သဒ္ဒါမှန်ပါတယ်။) အဲဒီ သီချင်းစာသားတွေနေရာမှာ အစားထိုးပြီး တခြားဝါကျတွေ ပြောင်းပြောလို့ ရေးလို့ ရပါမယ်။
ဥပမာလေး ပြောရရင် “Just give meareason” ဆိုတာကနေ “Just tell me the answer.” “Just show me the way.” “Just tell me the truth.” စတာတွေ ပွားယူတာမျိုးပါ။ သီချင်းတိုင်းကနေ ဒီလို လေ့လာယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်ချင်ရင် ခုပဲ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ကြတော့နော်။
၃။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ပါးစပ် မပိတ်ကြေး
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး ဘာကြီးပါလိမ့် ထင်မိမယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ့်အားလပ်ချိန် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရင် (ခပ်တိုးတိုးပဲဖြစ်ဖြစ် .. အနည်းဆုံး စိတ်ထဲကနေဖြစ်ဖြစ်) နောက်ကနေ လိုက်ပြောကြည့်ဖို့ပါ။ ကိုယ်ပြောတာ မှားများနေမလား … သူများက ကိုယ့်ကို လှောင်များ လှောင်မလား စိုးရိမ်စရာ မလိုတဲ့ စကားပြောလေ့ကျင့်နည်းပါ။ မိသားစုဝင်တွေရှေ့တော့ ရှက်စရာမလိုဘူး ထင်ပါတယ် … အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တိုးတက်စေချင်လို့ လေ့ကျင့်နေတာပဲလေ။ လှောင်စရာမှ မဟုတ်တာ။
အမြဲတမ်း လုပ်ရမယ် မဆိုလိုပါ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူရင်း အင်္ဂလိပ်ကား ကြည့်ချိန်မှာ အပျင်းလည်းပြေ အင်္ဂလိပ်အရည်အသွေးလည်း တိုးတက်စရာ … တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပါ။ ရုပ်ရှင်မှ မဟုတ်ပါ … BBC VOA Al Jazeera သီတင်းတွေ နားထောင်ရင်းလည်း လေ့ကျင့်လို့ရတာပဲ။ ကျယ်ကျယ် အသံထုတ် လိုက်မပြောဖြစ်ရင်တောင် နားထောင်ရင်း အသူံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာဖြစ်နေမှာပေါ့။ မရှက်ပါနဲ့ … လုပ်ကြည့်ပါ။
သူတို့ ပြောနေတဲ့ နှုန်းက မြန်နေတော့ လိုက်ပြောရမှာ ခက်မှာပေါ့ … မီသလောက် လိုက်ပြောကြည့်ပါ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် တစ်ကြောင်းကျော်ပြီး ဆိုပါစို့။ အချိန်တစ်ခုအကြာမှာ နှုတ်သွက်လာတာ သတိပြုမိမှာပါ။
၄။ ကလေးငယ်တွေကို အသုံးချပါ
အိမ်မှာ ကလေးငယ်ရှိရင် အခွင့်ကောင်းပါ။ သူတို့အတွက် ကာတွန်းကားလေးတွေ ပြဖြစ်မယ် ဆိုရင် လူကြီးတွေလည်း လေ့ကျင့်ဖို့ အခွင့်ကောင်းတစ်ခု ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကလေးငယ်များအတွက် ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်စာအုပ်လေးတွေ ကာတွန်းစာအုပ်လေးတွေကို ကို်ယ့်တူကိုယ့်သားများကို အသံထွက် ဖတ်ပြပေးဖို့ပါ။
အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက် ပြောလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ရေးတဲ့စာအုပ်တွေ ထုတ်တဲ့ အခွေတွေကို (လုံးဝ) အားမထားပါနဲ့။ စော်ကားလိုခြင်း အလျဉ်းမဟုတ်ပါ … ဒါပေမယ့် ကြံုဖူးသလောက် အမှားတွေ အလွန် များလို့ပါ။ မူရင်း authentic material တွေကိုသာ သုံးပါ။ ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာတွေရေးတဲ့ နှစ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်တဲ့ ကလေးစာအုပ်များသည် (အားလုံး ဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတယ် မဆိုနိုင်ပေမယ့်) ဘာသာစကား လေ့လာစရာ အကောင်းဆုံး စံနမူနာ မဟုတ်လို့ မူရင်း အင်္ဂလိပ် စာအုပ်များ အခွေများကိုသာ သုံးကြဖို့ အကြံပြုတာပါ။
နောက်တစ်ချက်က ကလေးငယ်များကို အသုံးချရင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖြစ်အောင် ပြောကြည့်ကြစေချင်တာပါ။ “Let’s go.” “Wait for me.” “It’s lunch time.” “Open your mouth.” စတာမျိုးလေးတွေက အင်မတန် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မပြောဖြစ်ဘဲ ဖြစ်နေရင် ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပြောရင်း ကိုယ်လည်း နှုတ်သွက်လာပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကလေးတွေကို International School တွေမှာ ထားဖို့ စိတ်ကူးထားတယ် … ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ အဲလိုကျောင်းတွေမှာ ထားနေတယ် ဆိုရင်ပေါ့။ ကလေးအတွက်ရော မိဘအတွက်ပါ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
၅။ကလေးလုပ်ပါ … သူငယ်ပြန်ပါ
ကလေးစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပါ။ Graded Readers တွေ ဖတ်ပါ။ ကလေးစာပေဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့။ အခြေခံကျကျ အသံးအနှုန်း မှန်မှန်ကန်ကန် အဲဒီကနေ ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်မသိထားသေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေလည်း တွေ့မိပါလိမ့်မယ်။Audio book တွေလည်း လာတတ်လို့ အားချိန်မှာ စာအုပ်နဲ့တွဲပြီး နားထောင်ရင်း အသံထွက်ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာက လူကြီးတွေမှာ လိုနေတတ်တဲ့ အခြေခံလေးတွေကို ကလေးစာပေ ဖတ်ရင်း ရနိုင်တယ်ဆိုတာ အကြံပေးချင်တာပါ။ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ကားမောင်းရင်း ကားစီးရင်း ရထားစီးရင်း ဆိုင်ကယ်စီးရင်းလည်း နားထောင်လို့ ရတယ်နော်။
၆။ Social Media ကို အသုံးချပါ
Facebook အပါအဝင် social media တွေကနေ သင်ယူတတ်မယ်ဆို သင်ယူစရာ အများကြီးပါ။ English ဘာသာစကား လမ်းညွှန်တွေ သင်ခန်းစာတွေ နေ့စဉ် တင်ပေးနေတဲ့ page တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ like လုပ်ထား … follow လုပ်ထားပါ။ နိုင်ငံတကာက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာနေသူတွေ ဖွဲ့ထားတဲ့ group တွေ ရှိပါတယ်။ member ဝင်ထားပါ။ friend မဟုတ်နေရင်တောင် သူတို့နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိနေပါမယ်။ ကို်ယ် စိတ်ဝင်စားရာခေါင်းစဉ်ရှိရင် မှားမှာမကြောက်ဘဲ အင်္ဂလိပ်လို ပါဝင် ဆွေးနွေးပါ။ comment ပေးပါ။ မေးလိုတာကို မေးပါ။ ဒီနည်းအားဖြင့်လည်း အရေးအဖတ်စွမ်းရည်များ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လေ့ကျင့်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ Diary ရေးပါ
အင်္ဂလိပ်လို diary လေး ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်ပါလား။ အသေးစိတ် ရေးဖို့ မဆိုလိုသလို အစပိုင်းမှာ broken English လည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပေါ့ … အမှားလည်း ပါနိုင်တာပေါ့။ အရေးကြီးတာက ရေးဖြစ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ဖြစ်စေချင်တာပါ။ Accuracy မှန်ဖို့ထက် fluency ချောချောမွေ့မွေ့ လက်ကရေးထွက်ဖို့ ပို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Online မှာလည်း ရေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် blog လေးတွေမှာ တစ်ကြောင်းစ နှစ်ကြောင်းစကနေ စပြီး ရေးလည်း ရတာပဲ။
ကျွန်တော်တောင် online မှာ ရောက်တတ်ရာရာ စာတိုပေစ ရေးရင်း (မြန်မာလို ဆိုလိုတာပါ။) ရေးလိုရာရာကို လူနားလည်အောင် တဖြည်းဖြည်း ရေးတတ်လာသလို ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ်ရေးတာကို ပိုပြီး ယုံကြည်မှု ဖြစ်လာစေတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက်ကို ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် အချိန်ပေးပြီး ခေါင်းထဲပေါ်တာ ရောက်တတ်ရာရာကို ballpen မလွှတ်တမ်း keyboard က လက်မခွာစတမ်း ချရေးကြည့်ပါလား။ ရှေ့ပိုင်းမှာခက်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
၈။ သိသူဖော်စားတဲ့ ရတနာသိုက်
အမှတ် (၆)မှာတုန်းက social media အကြောင်း ပြောပြီးသွားပါပြီ။ အဲဒါကတော့ Facebook သုံးရင်း နည်းနည်းစီ သင်ယူနည်းပေါ့။ ခုပြောမှာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးတဲ့ website တွေ အကြောင်းပါ။ မြန်မာလို ရေးထားတာဆို Myanmar Network လို ဆိုက်တွေ ရှိပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ် အားတဲ့အချိန်လေးအတွင်း … ညဖက်ဖြစ်ဖြစ် မနက်စေစောဖြစ်ဖြစ် အချိန်သတ်မှတ်ချက်မရှိ အားရင်အားသလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ website တွေလည်း အများကြီးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် coursera တို့ futurelearn တို့ပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ စာရင်း ပေးလို့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက စိတ်ပါဝင်စားသူတွေနဲ့အတူတူ စာသင်တဲ့ video clip လေးတွေ ကြည့်လိုက်၊ audio file လေးတွေ ဖွင့် နားထောင်လိုက်၊ pdf စာအုပ်လေးတွေ download လုပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်၊ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ဝင်ဖြေလိုက်၊ ကိုယ်က မေးချင်တာ မေးလိုက်နဲ့ဆို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ အဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူနေဖြစ်တာပေါ့။ BBC Learning English တို့လို website တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အများကြီးပါ။ Youtube တို့ study.com တို့လည်း အပါအဝင်ပေါ့။ ပိုက်ဆံပေးပြီး တက်ရတဲ့ သင်တန်းတွေလည်း online မှာ တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။ Academic ပို်င်း ပိုဆန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတို့အတွက်ဆို TED talk တွေ နားထောင်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် IELTS ဖြေဆိုဖို့ လေ့ကျင့်နေကြသူများအတွက်ပါ။ subtitle ပါ တွဲလျက် download လုပ်လို့ရတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဗျာ။
File size အကြီးကြီးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော် သေးသေးလေးတွေပါ။ဒီအတွက် အင်တာနက် အသုံးစရိတ် တစ်လကို တစ်သောင်းနှစ်သောင်းထက် မပိုပါဘူး။ ပြန်ရမယ့် အကျိုးအမြတ်က အလွန် အဖိုးတန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် internet speed ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် စိတ်မပူပါနဲ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းတစ်လုံး laptop တစ်လုံးနဲ့ ကျောင်းတောင်တက်လာတာပါ။ မနက်စောစောလိုမျိုးဆို streaming တောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ချင်ရင် အရေးအကြီးဆုံက ပြောဖြစ်အောင်ပြောဖို့ပါ။ ပြောရမယ့်သူ မရှိဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြော .. အသံသွင်းထား … ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ။ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရင် ကိုယ်ပြောတာကိုယ် နားထောင်ကြည့်လို့ ရပါပြီ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကို အသံထွက်ဖတ်တာ ရုပ်ရှင်ထဲက ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေ လိုက်ရွတ်တာတွေကို ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အသံသွင်းထားပြီး ပြန် နားထောင်ကြည့် … ကိုယ် ဘာတွေလိုနေတာလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိပါလိမ့်မယ်။ နီးစပ်ရာ ဆရာတစ်ဦးဦးကို ပေးနားထောင်ခိုင်းလို့လည်း ရပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်နားမှာ ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်မယ့်သူ မရှိဘူး ဆိုလည်း တစ်ယာက်ထဲ တတွတ်တွတ် အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီး အသံကူးထားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ ပြောစရာ အဖော်လည်း မရှိမယ့်သူမျိုးတွေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပြောထွက်အောင် လုပ်တာပါ။ နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးနဲ့ သိကြွမ်းတယ်ဆိုလည်း သူနဲ့ ကြံုတိုင်းဆုံတိုင်း တစ်လုံးစနှစ်လုံးစဖြစ်ဖြစ် ရအောင် ပြော။ အဓိကက ပြောထွက်ဖို့ပါ … မှားတာမှန်တာ နောက်တစ်ဆင့်။ များသောအားဖြင့် ကြံုရတဲ့ ပြသနာက မပြောရဲတာ … ကိုယ့်နှုတ်ကနေ အင်္ဂလိပ်လို ပြောမထွက်တာမျိုးကိုး၊ နှုတ်ရဲစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့။
ဘာသာစကားတစ်ခု တတ်ကျွမ်းဖို့အတွက် ဖြတ်လမ်း မရှိပါ။ အဲဒီဘာသာစကားနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လက်ပွန်းတတီး ထိတွေ့နေမှသာ ရတာမျိုးပါ။ အဲလိုဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ကို်ယ့်အိမ်မှာ ရအောင် ဖန်တီးယူပါ။ တကူးတက အချိန်ပေးပြီးလည်း လုပ်သင့်သလို တခြား အိမ်အလုပ် လုပ်ရင်း ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း အနားယူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိအောင်နေပါ။ တီဗီ ဖုန်း ကက်ဆက် ရေဒီယို နောက်ခံ background အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေ ဆိုနေတာ တစ်ခုခု ဖွင့်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။ အားစိုက်ထုတ်ပြီး နားထောင်မနေပါနဲ့ … မိတ်ဆွေရဲ့နားထဲ ကြားမှန်းမသိ ကြားနေရရင်ကို ဦးနှောက်က သူ့ဟာသူ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
သေးသေးမွှားမွှား လွယ်လွယ်ကူကူလေးတွေကစပြီး အပြောကျင့်ပါ။ ဘသာစကားတစ်ခု လေ့လာတာ ပျော်စရာအဖြစ် ရှုမြင်ပါ။ မကြောက်ပါနဲ့။ မှားလည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ရဲစိတ်မွေး အားတင်းထား … မရမက မဖြစ်မနေ ပြောဖြစ်အောင်ပြော ရေးဖြစ်အောင်ရေးပါ။ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီတိုင်းနေတုန်းကနဲ့မတူဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တိုးတက်လာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့သြစရာ ကိုယ်တိုင် ကြံုလာရပါလိမ့်မယ်။ ကိုင်း ခုပဲ စလိုက်ကြစို့လား။ ဖုန်းထဲက အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေး စနားထောင်လိုက်တော့နော်။
[ ဦးကျော်မိုးအောင် ရေးသားထားသော အခြားဆောင်းပါးများကို ဤနေရာတွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ - Myanmar Network Admin Team ]
ခက်တာက စကားပြော သင်ခန်းစာ အသံသွင်းထားတာတွေကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို အကြိမ်ကြိမ် နားထောင်ဖို့ဆိုတာက ပျင်းစရာ အကောင်းသား။ဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်တာက တေးသီချင်းတွေက တစ်ဆင့်ပေါ့လေ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း များများ နားထောင်ပါ။ လိုက်ဆိုပါ။
အိမ်မှာ ကလေးငယ်ရှိရင် အခွင့်ကောင်းပါ။ သူတို့အတွက် ကာတွန်းကားလေးတွေ ပြဖြစ်မယ် ဆိုရင် လူကြီးတွေလည်း လေ့ကျင့်ဖို့ အခွင့်ကောင်းတစ်ခု ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကလေးငယ်များအတွက် ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်စာအုပ်လေးတွေ ကာတွန်းစာအုပ်လေးတွေကို ကိုယ့်တူကိုယ့်သားများကို အသံထွက် ဖတ်ပြပေးဖို့ပါ။
အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက် ပြောလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ရေးတဲ့စာအုပ်တွေ ထုတ်တဲ့ အခွေတွေကို (လုံးဝ) အားမထားပါနဲ့။ စော်ကားလိုခြင်း အလျဉ်းမဟုတ်ပါ … ဒါပေမယ့် ကြုံဖူးသလောက် အမှားတွေ အလွန် များလို့ပါ။ မူရင်း authentic material တွေကိုသာ သုံးပါ။ ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာတွေရေးတဲ့ နှစ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်တဲ့ ကလေးစာအုပ်များသည် (အားလုံး ဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတယ် မဆိုနိုင်ပေမယ့်) ဘာသာစကား လေ့လာစရာ အကောင်းဆုံး စံနမူနာ မဟုတ်လို့ မူရင်း အင်္ဂလိပ် စာအုပ်များ အခွေများကိုသာ သုံးကြဖို့ အကြံပြုတာပါ။
Facebook အပါအဝင် social media တွေကနေ သင်ယူတတ်မယ်ဆို သင်ယူစရာ အများကြီးပါ။ English ဘာသာစကား လမ်းညွှန်တွေ သင်ခန်းစာတွေ နေ့စဉ် တင်ပေးနေတဲ့ page တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ like လုပ်ထား … follow လုပ်ထားပါ။ နိုင်ငံတကာက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာနေသူတွေ ဖွဲ့ထားတဲ့ group တွေ ရှိပါတယ်။ member ဝင်ထားပါ။ friend မဟုတ်နေရင်တောင် သူတို့နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိနေပါမယ်။ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားရာခေါင်းစဉ်ရှိရင် မှားမှာမကြောက်ဘဲ အင်္ဂလိပ်လို ပါဝင် ဆွေးနွေးပါ။ comment ပေးပါ။ မေးလိုတာကို မေးပါ။ ဒီနည်းအားဖြင့်လည်း အရေးအဖတ်စွမ်းရည်များ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လေ့ကျင့်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ် (၆)မှာတုန်းက social media အကြောင်း ပြောပြီးသွားပါပြီ။ အဲဒါကတော့ Facebook သုံးရင်း နည်းနည်းစီ သင်ယူနည်းပေါ့။ ခုပြောမှာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးတဲ့ website တွေ အကြောင်းပါ။ မြန်မာလို ရေးထားတာဆို Myanmar Network လို ဆိုက်တွေ ရှိပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ် အားတဲ့အချိန်လေးအတွင်း … ညဖက်ဖြစ်ဖြစ် မနက်စေစောဖြစ်ဖြစ် အချိန်သတ်မှတ်ချက်မရှိ အားရင်အားသလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ website တွေလည်း အများကြီးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် coursera တို့ futurelearn တို့ပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ စာရင်း ပေးလို့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက စိတ်ပါဝင်စားသူတွေနဲ့အတူတူ စာသင်တဲ့ video clip လေးတွေ ကြည့်လိုက်၊ audio file လေးတွေ ဖွင့် နားထောင်လိုက်၊ pdf စာအုပ်လေးတွေ download လုပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်၊ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ဝင်ဖြေလိုက်၊ ကိုယ်က မေးချင်တာ မေးလိုက်နဲ့ဆို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ အဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူနေဖြစ်တာပေါ့။ BBC Learning English တို့လို website တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အများကြီးပါ။ Youtube တို့ study.com တို့လည်း အပါအဝင်ပေါ့။ ပိုက်ဆံပေးပြီး တက်ရတဲ့ သင်တန်းတွေလည်း online မှာ တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။ Academic ပိုင်း ပိုဆန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတို့အတွက်ဆို TED talk တွေ နားထောင်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် IELTS ဖြေဆိုဖို့ လေ့ကျင့်နေကြသူများအတွက်ပါ။ subtitle ပါ တွဲလျက် download လုပ်လို့ရတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဗျာ။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်နားမှာ ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်မယ့်သူ မရှိဘူး ဆိုလည်း တစ်ယာက်ထဲ တတွတ်တွတ် အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီး အသံကူးထားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ ပြောစရာ အဖော်လည်း မရှိမယ့်သူမျိုးတွေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပြောထွက်အောင် လုပ်တာပါ။ နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးနဲ့ သိကြွမ်းတယ်ဆိုလည်း သူနဲ့ ကြုံတိုင်းဆုံတိုင်း တစ်လုံးစနှစ်လုံးစဖြစ်ဖြစ် ရအောင် ပြော။ အဓိကက ပြောထွက်ဖို့ပါ … မှားတာမှန်တာ နောက်တစ်ဆင့်။ များသောအားဖြင့် ကြုံရတဲ့ ပြသနာက မပြောရဲတာ … ကိုယ့်နှုတ်ကနေ အင်္ဂလိပ်လို ပြောမထွက်တာမျိုးကိုး၊ နှုတ်ရဲစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့။
ဘာသာစကားတစ်ခု တတ်ကျွမ်းဖို့အတွက် ဖြတ်လမ်း မရှိပါ။ အဲဒီဘာသာစကားနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လက်ပွန်းတတီး ထိတွေ့နေမှသာ ရတာမျိုးပါ။ အဲလိုဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်အိမ်မှာ ရအောင် ဖန်တီးယူပါ။ တကူးတက အချိန်ပေးပြီးလည်း လုပ်သင့်သလို တခြား အိမ်အလုပ် လုပ်ရင်း ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း အနားယူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိအောင်နေပါ။ တီဗီ ဖုန်း ကက်ဆက် ရေဒီယို နောက်ခံ background အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေ ဆိုနေတာ တစ်ခုခု ဖွင့်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။ အားစိုက်ထုတ်ပြီး နားထောင်မနေပါနဲ့ … မိတ်ဆွေရဲ့နားထဲ ကြားမှန်းမသိ ကြားနေရရင်ကို ဦးနှောက်က သူ့ဟာသူ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီတိုင်းနေတုန်းကနဲ့မတူဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တိုးတက်လာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့သြစရာ ကိုယ်တိုင် ကြုံလာရပါလိမ့်မယ်။ ကိုင်း ခုပဲ စလိုက်ကြစို့လား။ ဖုန်းထဲက အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေး စနားထောင်လိုက်တော့နော်။
မကွာခဏ ဆိုသလို ကွုံကွိုကျ တိုကျဆိုငျတိုငျး အမေးခံရတဲ့ မေးခှနျး တဈခု ရှိပါတယျ။ သူတို့ မေးတာက အငျ်ဂလိပျစာအငျ်ဂလိပျစကား တတျလညျး တတျခငြျတယျ ... သငျတနျးတှဘောတှေ တကျဖို့လညျး အခွအေနေ မပေးဘူး ... ဘယျလို လေ့ကငြ့ျရမလဲ ဆိုတာပါ။
မေးတဲ့သူတှကေ အမြားအားဖွင့ျ လူလတျပိုငျး အရှယျတှပေေါ့။ ရာထူးတာဝနျ လုပျငနျးဆောငျတာ မြိုးစုံနဲ့ အလုပျမြားနကွေသူ ... အခြိနျအား မြားမြားစားစား မရှိကွသူ တှပေါ။ ပညာအားဖွင့ျလညျး အနိမ့ျဆုံး ဆယျတနျးလောကျတော့ အောငျထားသူတှေ ဘှဲ့ရတှပေါ။
အထူးသဖွင့ျ နိုငျငံခွားသားတှေ အရငျကထကျ မွနျမာပွညျကို အဝငျအထှကျ ပိုမြားလာတဲ့ .... ပွညျတှငျးကသူတှေ နိုငျငံရပျခွား အသှားအလာ ပိုမြားလာတဲ့ ခုနောကျပိုငျးကာလတှမှော အငျ်ဂလိပျဘာသာစကား တတျကြှမျးဖို့ ပို အရေးပါလာတော့ ပို စိတျဝငျစားလာကွတာပေါ့လေ။
အဲလိုမြိုး အလုပျတဈဖကျနဲ့ လူလတျပိုငျးတှေ … သငျတနျးတှေ တကျနဖေို့လညျး အဆငျမပွသေူတှေ အိုးမကှာအိမျမကှာ အလုပျမပကြျစဘေဲ အငျ်ဂလိပျဘာသာစကား တိုးတကျအောငျ ဘယျလို လုပျနိုငျမလဲ ဆှေးနှေး အကွံပွုကွည့ျခငြျပါတယျ။
၁။ ကွား ပွော ဖတျ ရေး
စကားပွောခွငျးရဲ့ အစက နားထောငျခွငျးပါ။ ကလေးငယျတှေ စကားဘယျလိုပွောတတျလဲ စဉျးစားကွည့ျရငျ ကိုယျနားရညျဝနတောကို တုပပွောရငျး ပွောတတျလာတာ ဆိုတာ သတိထားမိမှာပါ။ အဲဒီနောကျမှာ သူငယျတနျးအရှယျလောကျ ရောကျတော့ ဝလုံး ဆိုတာ စဖတျတတျလာတယျ။ ABCD တှေ စ ဖတျတတျလာတယျ …. နောကျဆုံးမှ ရေးတာပါ။ ခုလညျးပဲ နိုငျငံခွား ဘာသာစကားတဈခုကို အဲဒီလို အစဉျအတိုငျး လေ့လာရငျ အတတျမွောကျဆုံးလို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
ဘာသာစကားနဲ့ မြားမြား ထိတှေ့ပါ။ မြားမြား နားထောငျပါ။ ပွောကွည့ျပါ။ မြားမြား ဖတျပါ။ ရေးကွည့ျပါ။ တတျကို တတျပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးက လှဲလို့လညျး တတျစရာ တခွားနညျးလမျး မရှိပါ။
၂။ ဆိုကွမယျ ပြောျကွမယျ
အဲဒီတော့ ပထမဆုံးအဆင့ျ ကိုယ့ျအနီးဆုံးမှာ အငျ်ဂလိပျလို ကွားနရေဖို့ လိုပါတယျ။ ပွောမယ့ျသူမရှိရငျ ခပျဆငျဆငျ ဖနျတီးယူနိုငျပါတယျ။ ကိုယ့ျကို နိုငျငံခွားသားကွီးတဈယောကျက အရှငျလတျလတျ အနားကနေ အငျ်ဂလိပျလို ပွောနမှေ အငျ်ဂလိပျစကား ကွားရတဲ့ခတျေမှ မဟုတျတော့ပဲ။ ဖုနျးထဲကနတေောငျ အသံ နားထောငျလို့ ရနပွေီ ဖွဈတော့ အငျ်ဂလိပျလို အသံသှငျးထားတဲ့ audio file တှေ မြားမြား နားထောငျပေးပေါ့။
ခကျတာက စကားပွော သငျခနျးစာ အသံသှငျးထားတာတှကေို တဈကွိမျထကျပို အကွိမျကွိမျ နားထောငျဖို့ဆိုတာက ပငြျးစရာ အကောငျးသား။ဒါကို ဖွရှေငျးနိုငျတာက တေးသီခငြျးတှကေ တဈဆင့ျပေါ့လေ။ အငျ်ဂလိပျသီခငြျး မြားမြား နားထောငျပါ။ လိုျကျဆိုပါ။
သီခငြျးကနေ တတျမွောကျနိုငျတာ အမြားကွီးပါပဲ … စကားလုံးတှေ သိလာမယျ။ နားထောငျစှမျးရညျ တကျလာမယျ။ အသံထှကျတှေ မှနျမှနျ ထှကျတတျလာမယျ။ intonation တှေ stress တှေ rhythm တှေ သငျမှနျးမသိ သငျယူပွီးသား ဖွဈလာမယျ။ စာကွောငျးလိုကျ သဒ်ဒါမှနျမှနျ သုံးတတျလာမယျ။ (သဒ်ဒါနညျးကြ မဟုတျတဲ့ ခြှငျးခကြျ တခြို့ကိုတော့ ဒီမှာ ထည့ျမပွောတော့ပါ။ အမြားအားဖွင့ျ သီခငြျးမြားမှာလညျး သဒ်ဒါမှနျပါတယျ။) အဲဒီ သီခငြျးစာသားတှနေရောမှာ အစားထိုးပွီး တခွားဝါကတြှေ ပွောငျးပွောလို့ ရေးလို့ ရပါမယျ။
ဥပမာလေး ပွောရရငျ “Just give meareason” ဆိုတာကနေ “Just tell me the answer.” “Just show me the way.” “Just tell me the truth.” စတာတှေ ပှားယူတာမြိုးပါ။ သီခငြျးတိုငျးကနေ ဒီလို လေ့လာယူနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ အငျ်ဂလိပျလို ပွောတတျခငြျရငျ ခုပဲ အငျ်ဂလိပျသီခငြျးတှေ နားထောငျရငျး လိုကျဆိုကွည့ျလိုကျကွတော့နောျ။
၃။ ရုပျရှငျကွည့ျရငျ ပါးစပျ မပိတျကွေး
ခေါငျးစဉျကိုကွည့ျပွီး ဘာကွီးပါလိမ့ျ ထငျမိမယျ။ ဆိုလိုခငြျတာက ကိုယ့ျအားလပျခြိနျ အငျ်ဂလိပျစကားပွော ရုပျရှငျ ဇာတျကားတှေ ကွည့ျရငျ (ခပျတိုးတိုးပဲဖွဈဖွဈ .. အနညျးဆုံး စိတျထဲကနဖွေဈဖွဈ) နောကျကနေ လိုကျပွောကွည့ျဖို့ပါ။ ကိုယျပွောတာ မှားမြားနမေလား … သူမြားက ကိုယ့ျကို လှောငျမြား လှောငျမလား စိုးရိမျစရာ မလိုတဲ့ စကားပွောလေ့ကငြ့ျနညျးပါ။ မိသားစုဝငျတှရှေေ့တော့ ရှကျစရာမလိုဘူး ထငျပါတယျ … အငျ်ဂလိပျဘာသာစကား တိုးတကျစခေငြျလို့ လေ့ကငြ့ျနတောပဲလေ။ လှောငျစရာမှ မဟုတျတာ။
အမွဲတမျး လုပျရမယျ မဆိုလိုပါ။ စိတျရောကိုယျပါ အနားယူရငျး အငျ်ဂလိပျကား ကွည့ျခြိနျမှာ အပငြျးလညျးပွေ အငျ်ဂလိပျအရညျအသှေးလညျး တိုးတကျစရာ … တဈခကြျခုတျ နှဈခကြျပွတျပါ။ ရုပျရှငျမှ မဟုတျပါ … BBC VOA Al Jazeera သီတငျးတှေ နားထောငျရငျးလညျး လေ့ကငြ့ျလို့ရတာပဲ။ ကယြျကယြျ အသံထုတျ လိုကျမပွောဖွဈရငျတောငျ နားထောငျရငျး အသူံးအနှုနျးတှကေို လေ့လာဖွဈနမှောပေါ့။ မရှကျပါနဲ့ … လုပျကွည့ျပါ။
သူတို့ ပွောနတေဲ့ နှုနျးက မွနျနတေော့ လိုကျပွောရမှာ ခကျမှာပေါ့ … မီသလောကျ လိုကျပွောကွည့ျပါ။ လှယျလှယျပွောရရငျ တဈကွောငျးကြောျပွီး ဆိုပါစို့။ အခြိနျတဈခုအကွာမှာ နှုတျသှကျလာတာ သတိပွုမိမှာပါ။
၄။ ကလေးငယျတှကေို အသုံးခပြါ
အိမျမှာ ကလေးငယျရှိရငျ အခှင့ျကောငျးပါ။ သူတို့အတှကျ ကာတှနျးကားလေးတှေ ပွဖွဈမယျ ဆိုရငျ လူကွီးတှလေညျး လေ့ကငြ့ျဖို့ အခှင့ျကောငျးတဈခု ရပါတယျ။ နောကျတဈခကြျက ကလေးငယျမြားအတှကျ ရေးသားထုတျဝတေဲ့ အငျ်ဂလိပျ ပုံပွငျစာအုပျလေးတှေ ကာတှနျးစာအုပျလေးတှကေို ကိုျယ့ျတူကိုယ့ျသားမြားကို အသံထှကျ ဖတျပွပေးဖို့ပါ။
အရေးကွီးတဲ့တဈခကြျ ပွောလိုပါတယျ။ မွနျမာပွညျက ရေးတဲ့စာအုပျတှေ ထုတျတဲ့ အခှတှေကေို (လုံးဝ) အားမထားပါနဲ့။ စောျကားလိုခွငျး အလဉြျးမဟုတျပါ … ဒါပမေယ့ျ ကွုံဖူးသလောကျ အမှားတှေ အလှနျ မြားလို့ပါ။ မူရငျး authentic material တှကေိုသာ သုံးပါ။ ဆိုလိုခငြျတာက မွနျမာတှရေေးတဲ့ နှဈဘာသာနဲ့ ထုတျတဲ့ ကလေးစာအုပျမြားသညျ (အားလုံး ဒီအတိုငျး ဖွဈနတေယျ မဆိုနိုငျပမေယ့ျ) ဘာသာစကား လေ့လာစရာ အကောငျးဆုံး စံနမူနာ မဟုတျလို့ မူရငျး အငျ်ဂလိပျ စာအုပျမြား အခှမြေားကိုသာ သုံးကွဖို့ အကွံပွုတာပါ။
နောကျတဈခကြျက ကလေးငယျမြားကို အသုံးခရြငျး အငျ်ဂလိပျလို ပွောဖွဈအောငျ ပွောကွည့ျကွစခေငြျတာပါ။ “Let’s go.” “Wait for me.” “It’s lunch time.” “Open your mouth.” စတာမြိုးလေးတှကေ အငျမတနျ ရိုးရှငျးလှယျကူပမေယ့ျ ကိုယ့ျဘာသာကိုယျ မပွောဖွဈဘဲ ဖွဈနရေငျ ကလေးငယျတှနေဲ့ ပွောရငျး ကိုယျလညျး နှုတျသှကျလာပါမယျ။ အထူးသဖွင့ျ ကိုယ့ျကလေးတှကေို International School တှမှော ထားဖို့ စိတျကူးထားတယျ … ဒါမှမဟုတျ လကျရှိ အဲလိုကြောငျးတှမှော ထားနတေယျ ဆိုရငျပေါ့။ ကလေးအတှကျရော မိဘအတှကျပါ အကြိုးရှိပါလိမ့ျမယျ။
၅။ကလေးလုပျပါ … သူငယျပွနျပါ
ကလေးစာအုပျလေးတှေ ဖတျပါ။ Graded Readers တှေ ဖတျပါ။ ကလေးစာပဆေိုပွီး အထငျမသေးပါနဲ့။ အခွခေံကကြြ အသံးအနှုနျး မှနျမှနျကနျကနျ အဲဒီကနေ ရပါလိမ့ျမယျ။ ကိုယျမသိထားသေးတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှလေညျး တှေ့မိပါလိမ့ျမယျ။Audio book တှလေညျး လာတတျလို့ အားခြိနျမှာ စာအုပျနဲ့တှဲပွီး နားထောငျရငျး အသံထှကျဖတျလို့ ရပါတယျ။ အဓိက ပွောခငြျတာက လူကွီးတှမှော လိုနတေတျတဲ့ အခွခေံလေးတှကေို ကလေးစာပေ ဖတျရငျး ရနိုငျတယျဆိုတာ အကွံပေးခငြျတာပါ။ အလုပျသှားအလုပျပွနျ ကားမောငျးရငျး ကားစီးရငျး ရထားစီးရငျး ဆိုငျကယျစီးရငျးလညျး နားထောငျလို့ ရတယျနောျ။
၆။ Social Media ကို အသုံးခပြါ
Facebook အပါအဝငျ social media တှကေနေ သငျယူတတျမယျဆို သငျယူစရာ အမြားကွီးပါ။ English ဘာသာစကား လမျးညှှနျတှေ သငျခနျးစာတှေ နေ့စဉျ တငျပေးနတေဲ့ page တှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ like လုပျထား … follow လုပျထားပါ။ နိုငျငံတကာက အငျ်ဂလိပျဘာသာစကား လေ့လာနသေူတှေ ဖှဲ့ထားတဲ့ group တှေ ရှိပါတယျ။ member ဝငျထားပါ။ friend မဟုတျနရေငျတောငျ သူတို့နဲ့ အဆကျအသှယျ ရှိနပေါမယျ။ ကိုျယျ စိတျဝငျစားရာခေါငျးစဉျရှိရငျ မှားမှာမကွောကျဘဲ အငျ်ဂလိပျလို ပါဝငျ ဆှေးနှေးပါ။ comment ပေးပါ။ မေးလိုတာကို မေးပါ။ ဒီနညျးအားဖွင့ျလညျး အရေးအဖတျစှမျးရညျမြား အတိုငျးအတာတဈခုထိ လေ့ကငြ့ျပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
အငျ်ဂလိပျလို diary လေး ကွိုးစားပွီး ရေးကွည့ျပါလား။ အသေးစိတျ ရေးဖို့ မဆိုလိုသလို အစပိုငျးမှာ broken English လညျး ဖွဈရငျ ဖွဈမှာပေါ့ … အမှားလညျး ပါနိုငျတာပေါ့။ အရေးကွီးတာက ရေးဖွဈတဲ့ အလေ့အကငြ့ျ ဖွဈစခေငြျတာပါ။ Accuracy မှနျဖို့ထကျ fluency ခြောခြောမှေ့မှေ့ လကျကရေးထှကျဖို့ ပို ရညျရှယျပါတယျ။ Online မှာလညျး ရေးလို့ရပါတယျ။ ကိုယျပိုငျ blog လေးတှမှော တဈကွောငျးစ နှဈကွောငျးစကနေ စပွီး ရေးလညျး ရတာပဲ။
ကြှနျတောျတောငျ online မှာ ရောကျတတျရာရာ စာတိုပစေ ရေးရငျး (မွနျမာလို ဆိုလိုတာပါ။) ရေးလိုရာရာကို လူနားလညျအောငျ တဖွညျးဖွညျး ရေးတတျလာသလို ခံစားရပါတယျ။ ကိုယျရေးတာကို ပိုပွီး ယုံကွညျမှု ဖွဈလာစတေယျ။ တဈရကျတဈရကျကို ငါးမိနဈ ဆယျမိနဈ အခြိနျပေးပွီး ခေါငျးထဲပေါျတာ ရောကျတတျရာရာကို ballpen မလှှတျတမျး keyboard က လကျမခှာစတမျး ခရြေးကွည့ျပါလား။ ရှေ့ပိုငျးမှာခကျပမေယ့ျ တဖွညျးဖွညျး တိုးတကျလာပါလိမ့ျမယျ။
၈။ သိသူဖောျစားတဲ့ ရတနာသိုကျ
အမှတျ (၆)မှာတုနျးက social media အကွောငျး ပွောပွီးသှားပါပွီ။ အဲဒါကတော့ Facebook သုံးရငျး နညျးနညျးစီ သငျယူနညျးပေါ့။ ခုပွောမှာကတော့ အငျ်ဂလိပျစာ သငျကွားပေးတဲ့ website တှေ အကွောငျးပါ။ မွနျမာလို ရေးထားတာဆို Myanmar Network လို ဆိုကျတှေ ရှိပါမယျ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျ အားတဲ့အခြိနျလေးအတှငျး … ညဖကျဖွဈဖွဈ မနကျစစေောဖွဈဖွဈ အခြိနျသတျမှတျခကြျမရှိ အားရငျအားသလို အငျ်ဂလိပျဘာသာစကား အခမဲ့ လေ့လာသငျယူနိုငျတဲ့ website တှလေညျး အမြားကွီးပါ။ ဥပမာအားဖွင့ျ coursera တို့ futurelearn တို့ပါ။ လှယျလှယျကူကူပဲ စာရငျး ပေးလို့ ရပါတယျ။ နိုငျငံတကာက စိတျပါဝငျစားသူတှနေဲ့အတူတူ စာသငျတဲ့ video clip လေးတှေ ကွည့ျလိုကျ၊ audio file လေးတှေ ဖှင့ျ နားထောငျလိုကျ၊ pdf စာအုပျလေးတှေ download လုပျပွီး ဖတျကွည့ျလိုကျ၊ မေးထားတဲ့ မေးခှနျးလေးတှေ ဝငျဖွလေိုကျ၊ ကိုယျက မေးခငြျတာ မေးလိုကျနဲ့ဆို အငျ်ဂလိပျဘာသာစကားနဲ့ အဆကျမပွတျ လေ့လာသငျယူနဖွေဈတာပေါ့။ BBC Learning English တို့လို website တှလေညျး ရှိပါတယျ။ အမြားကွီးပါ။ Youtube တို့ study.com တို့လညျး အပါအဝငျပေါ့။ ပိုကျဆံပေးပွီး တကျရတဲ့ သငျတနျးတှလေညျး online မှာ တဈပုံတဈပငျပါ။ Academic ပိုျငျး ပိုဆနျတဲ့ အငျ်ဂလိပျစာ လေ့လာသူတို့အတှကျဆို TED talk တှေ နားထောငျစခေငြျပါတယျ။ ဥပမာအားဖွင့ျ IELTS ဖွဆေိုဖို့ လေ့ကငြ့ျနကွေသူမြားအတှကျပါ။ subtitle ပါ တှဲလကြျ download လုပျလို့ရတော့ အတိုငျးထကျအလှနျပါပဲဗြာ။
File size အကွီးကွီးတှေ မဟုတျပါဘူး။ တောျတောျ သေးသေးလေးတှပေါ။ဒီအတှကျ အငျတာနကျ အသုံးစရိတျ တဈလကို တဈသောငျးနှဈသောငျးထကျ မပိုပါဘူး။ ပွနျရမယ့ျ အကြိုးအမွတျက အလှနျ အဖိုးတနျပါတယျ။ မွနျမာပွညျ internet speed ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျ စိတျမပူပါနဲ့ ရပါတယျ။ ကြှနျတောျလညျး ဖုနျးတဈလုံး laptop တဈလုံးနဲ့ ကြောငျးတောငျတကျလာတာပါ။ မနကျစောစောလိုမြိုးဆို streaming တောငျ လုပျလို့ရပါသေးတယျ။
အငျ်ဂလိပျစကားပွောတတျခငြျရငျ အရေးအကွီးဆုံက ပွောဖွဈအောငျပွောဖို့ပါ။ ပွောရမယ့ျသူ မရှိဖွဈနရေငျ ကိုယ့ျဟာကိုယျ ပွော .. အသံသှငျးထား … ပွနျနားထောငျကွည့ျပါ။ ဖုနျးတဈလုံးရှိရငျ ကိုယျပွောတာကိုယျ နားထောငျကွည့ျလို့ ရပါပွီ။
အပေါျမှာ ပွောခဲ့တဲ့ စာအုပျကို အသံထှကျဖတျတာ ရုပျရှငျထဲက ဒိုငျယာလော့ချတှေ လိုကျရှတျတာတှကေို ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ အသံသှငျးထားပွီး ပွနျ နားထောငျကွည့ျ … ကိုယျ ဘာတှလေိုနတောလညျး ကိုယ့ျဟာကိုယျ သိပါလိမ့ျမယျ။ နီးစပျရာ ဆရာတဈဦးဦးကို ပေးနားထောငျခိုငျးလို့လညျး ရပါတယျ။
တဈခါတဈလေ ကိုယ့ျနားမှာ ကဲ့ရဲ့လှောငျပွောငျမယ့ျသူ မရှိဘူး ဆိုလညျး တဈယာကျထဲ တတှတျတှတျ အငျ်ဂလိပျလိုပွောပွီး အသံကူးထားကွည့ျပေါ့ဗြာ။ ဒါကတော့ ပွောစရာ အဖောျလညျး မရှိမယ့ျသူမြိုးတှေ မဖွဈဖွဈအောငျ ပွောထှကျအောငျ လုပျတာပါ။ နိုငျငံခွားသား မိတျဆှေ တဈဦးဦးနဲ့ သိကွှမျးတယျဆိုလညျး သူနဲ့ ကွုံတိုငျးဆုံတိုငျး တဈလုံးစနှဈလုံးစဖွဈဖွဈ ရအောငျ ပွော။ အဓိကက ပွောထှကျဖို့ပါ … မှားတာမှနျတာ နောကျတဈဆင့ျ။ မြားသောအားဖွင့ျ ကွုံရတဲ့ ပွသနာက မပွောရဲတာ … ကိုယ့ျနှုတျကနေ အငျ်ဂလိပျလို ပွောမထှကျတာမြိုးကိုး၊ နှုတျရဲစဖေို့ လေ့ကငြ့ျခနျးပေါ့။
ဘာသာစကားတဈခု တတျကြှမျးဖို့အတှကျ ဖွတျလမျး မရှိပါ။ အဲဒီဘာသာစကားနဲ့ အကွိမျကွိမျအခါခါ လကျပှနျးတတီး ထိတှေ့နမှေသာ ရတာမြိုးပါ။ အဲလိုဝနျးကငြျဖွဈအောငျ ကိုျယ့ျအိမျမှာ ရအောငျ ဖနျတီးယူပါ။ တကူးတက အခြိနျပေးပွီးလညျး လုပျသင့ျသလို တခွား အိမျအလုပျ လုပျရငျး ကာယလေ့ကငြ့ျခနျးလုပျရငျး အနားယူရငျး အငျ်ဂလိပျဘာသာစကားနဲ့ ထိတှေ့မှု ရှိအောငျနပေါ။ တီဗီ ဖုနျး ကကျဆကျ ရဒေီယို နောကျခံ background အနနေဲ့ အငျ်ဂလိပျလိုပွောနေ ဆိုနတော တဈခုခု ဖှင့ျထားပွီး အလုပျလုပျပါ။ အားစိုကျထုတျပွီး နားထောငျမနပေါနဲ့ … မိတျဆှရေဲ့နားထဲ ကွားမှနျးမသိ ကွားနရေရငျကို ဦးနှောကျက သူ့ဟာသူ အလုပျလုပျနပေါလိမ့ျမယျ။
သေးသေးမှှားမှှား လှယျလှယျကူကူလေးတှကေစပွီး အပွောကငြ့ျပါ။ ဘသာစကားတဈခု လေ့လာတာ ပြောျစရာအဖွဈ ရှုမွငျပါ။ မကွောကျပါနဲ့။ မှားလညျး ဘာမှ မဖွဈပါ။ ရဲစိတျမှေး အားတငျးထား … မရမက မဖွဈမနေ ပွောဖွဈအောငျပွော ရေးဖွဈအောငျရေးပါ။ ဘာလေးပဲဖွဈဖွဈ ဖတျဖွဈအောငျဖတျပါ။
အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခု ကွာလာတာနဲ့အမြှ ဒီတိုငျးနတေုနျးကနဲ့မတူဘဲ အငျ်ဂလိပျဘာသာစကား တိုးတကျလာတာ ကိုယ့ျကိုယျကို အံ့သွစရာ ကိုယျတိုငျ ကွုံလာရပါလိမ့ျမယျ။ ကိုငျး ခုပဲ စလိုကျကွစို့လား။ ဖုနျးထဲက အငျ်ဂလိပျသီခငြျးလေး စနားထောငျလိုကျတော့နောျ။
[ ဦးကြောျမိုးအောငျ ရေးသားထားသော အခွားဆောငျးပါးမြားကို ဤနရောတှငျ လေ့လာဖတျရှုနိုငျပါတယျ။ - Myanmar Network Admin Team ]
အခွားသငျခနျးစာမြား ဖတျရှု လေ့လာရနျ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...
Permalink Reply by Win Kyaw Aung on February 26, 2016 at 11:01
Thank u brotherI must try.:-)
Permalink Reply by htaylim on February 26, 2016 at 12:25
Permalink Reply by Zar Ma Ni on February 26, 2016 at 12:52
Permalink Reply by Phyo Pyae Win on February 26, 2016 at 17:44
Permalink Reply by Aong Rine Sone on February 26, 2016 at 21:02
I'll try my best. Thanks so much!
Permalink Reply by khin htay myint on February 27, 2016 at 8:16
Permalink Reply by Phyu Phyu Aung on February 27, 2016 at 13:48
Permalink Reply by Win Lwin Myint on February 27, 2016 at 21:54
Facebook ထဲမွာ ဘယ္ page ေတြက English စာ ေလ႔လာဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲ ဆိုတာကို သိပါရေစ။
Permalink Reply by Myo Aung on February 28, 2016 at 9:07
Permalink Reply by aungnaingthu on February 28, 2016 at 12:11
Permalink Reply by htayhtay on February 29, 2016 at 0:53
Permalink Reply by mayko on February 29, 2016 at 16:37
Really Really thanks for your sharing knowledge